အစားအသောက်နှင့် ရန်ပုံငွေများ - Galveston ကောင်တီ အစားအသောက်ဘဏ်
Galveston ကောင်တီရှိနေထိုင်သူ ၆ ဦး တွင် ၁ ယောက်သည်နေ့စဉ်စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။
သင်လိုအပ်နေသောအိမ်နီးချင်းတစ် ဦး အတွက်သင်ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်
Food & Fund Drive Packet ကို download လုပ်ရန်ဒီကိုနှိပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိ AmazonSmile ပရဟိတစာရင်းကိုကြည့်ရန်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
လတစ်လ၏ Food Drive အကြောင်းအရာ
မှာဂျူလီ Morreale ဆက်သွယ်ပါ Julie@galvestoncountyfoodbank.org
Food Drives အမေးအဖြေများ
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုသောမည်သူမဆိုအစားအစာမောင်းနှင်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများ၊ အုပ်စုများ၊ ကလပ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းတော်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းများစသဖြင့်…
ဘယ်လိုအစားအစာ drives တွေကိုလက်ခံပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်တည်တံ့။ လုပ်ဆောင်နိုင်သောပျက်စီးလွယ်သောအစားအစာအမျိုးအစားအားလုံးကိုလက်ခံပါသည် မဟုတ် အအေးလိုအပ်သည်။
ဆန်၊ ပဲ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ကောက်နှံ၊ oatmeal စသည့်ခြောက်သွေ့သောကုန်စည်များ
ဟင်းချို၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ တူနာ၊ ကြက်၊ ပဲစသည်တို့ကဲ့သို့စည်သွပ်ဘူးများ။
လုံခြုံသောပစ္စည်းများ - မြင့်မားသောအသွားအလာareaရိယာကိုစုဆောင်းရန်သင်၏တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။
ဖြည့်ထားသော Food & Fund Drive ပါ ၀ င်မှုပုံစံကိုတင်ပြခြင်းအားဖြင့် GCFB တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။
သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုအက္ခရာများ၊ အီးမေးလ်၊ လက်ကမ်းကြော်ငြာများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်အခြားသူများအားအသိပေးရန်သင့် Drive ကိုမြှင့်တင်ပါ။
Food & Fund Drive packet ကို download လုပ်ပါ
အစားအစာ drive ကို run ဖို့နည်းလမ်းအချို့ကဘာတွေလဲ။
နံနက်စာပစ္စည်းများ: သီးနှံ၊ oatmeal၊ စီရီရယ်အရက်ဆိုင်များ၊ ချက်ချင်းမနက်စာ၊
ကလေးများအကြိုက်ဆုံး: သစ်သီးဖျော်ရည်၊ မြေပဲထောပတ်၊ granola အရက်ဆိုင်၊ မက်ကာနီနှင့်ဒိန်ခဲ၊ စားဖိုမှူးဘိုဒီဒီ၊ စီရီရယ်
ညစာစားချိန်: Pastas၊ Marinara ငံပြာရည်၊ ကြက်၊ တူနာကဲ့သို့စည်သွတ်အသားများ၊ Tuna Helper၊ Betty Crocker Helper Complete Meals စသည့်“ အစားအစာ -In-a-box” စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပေးဆပ်ရန် ပို၍ စိတ်အားထက်သန်စေရန်သင်၏အဖွဲ့ကိုဖော်ရွေသောပြိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုသုံးပါ။ အစားအစာအများဆုံးမည်သူကောက်ယူသည်ကိုစာသင်ခန်းများ၊ ဌာနများ၊ အုပ်စုများ၊ ကြမ်းပြင်များအကြားအသင်းများကိုဖန်တီးပါ။ “ ဆုရသူများ” သည်သူတို့၏ထည့်ဝင်မှုအတွက်အထူးအသိအမှတ်ပြုမှုကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
စုဆောင်းထားသည့်အစားအစာတစ်ပေါင်အတွက်ဒေါ်လာလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကုမ္ပဏီသည် Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်သို့သင်၏အစားအစာလှူဒါန်းမှုနှင့်ကိုက်ညီနိုင်မနိုင်မေးမြန်းပါ။ ဘဏ္matchာရေးပွဲအစီအစဉ်အကြောင်းသင်၏ကုမ္ပဏီ၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏အစားအစာမောင်းနှင်မှုကိုလူမှုမီဒီယာများ၊ သတင်းလွှာများ၊ စာစောင်များ၊ ကြေငြာချက်များ၊ လက်ကမ်းကြော်ငြာများ၊ မှတ်စုတိုများ၊
ဤစာမျက်နှာတွင် download လုပ်နိုင်သောမြင့်မားသော resolution ရှိသောတရားဝင် GCFB လိုဂိုရှိသည်။ သင်၏အစားအစာမောင်းနှင်ပွဲအတွက်သင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများပေါ်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ထည့်ပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများဖန်တီးခြင်းအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက် Food & Fund Drive packet ကို download လုပ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ဖြစ်ရပ်ကိုထောကျပံ့ပေးချင်ပါတယ်! သင်၏လက်ကမ်းကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများတွင်သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို tag ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ!
တွစ်တာ - @GalCoFoodBank
လှူဒါန်းခဲ့သောပစ္စည်းများအားလုံးကို Texas City, TX, 624 4th Ave N ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဂိုဒေါင်တွင်လက်ခံသည်။ 77590. တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့နံနက် ၃ နာရီမှညနေ ၃ နာရီအထိ။
Fund Drive အမေးအဖြေများ
ရန်ပုံငွေ drive ကဘာလဲ?
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်တိုက်ပွဲကို ဦး ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုငွေနှင့်အစားအစာနှစ်မျိုးလုံးကူညီသည်။ GCFB သည်အမေရိကနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်တက္ကဆက်ကိုအစာကျွေးသောအသင်း ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းသည်တစ်ဒေါ်လာလျှင်တစ်ကြိမ်လျှင် ၄ ချက်စီအစားအစာများကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်းအားဖြင့်အစားအသောက်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ငွေကိုကျွန်ုပ်တို့၏ webstie တွင်ငွေသား၊ ချက်လက်မှတ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအဖြစ်စုဆောင်းနိုင်သည်။ www.galvestoncountyfoodbank.org.
ငွေသားအကယ်၍ ငွေသားပေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အခွန်နှုတ်ယူငွေကိုလက်ခံလိုပါက၎င်းတို့၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါ။
စစ်ဆေးမှုများအတွက်ကျေးဇူးပြု၍ Galveston ကောင်တီစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။ ချက်လက်မှတ်၏ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိသင့်အဖွဲ့အစည်း / အဖွဲ့အမည်ကိုမှတ်ထားပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏အဖြစ်အပျက်သည်အကြွေးရရှိမည်။ ဥပမာ Food & Fund Drive packet တွင်ကြည့်ပါ။
အွန်လိုင်းအတွက်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသော Food & Fund Drive ကိုတင်ပြပြီးသောအခါသင်အွန်လိုင်းလှူဒါန်းမှုများကိုအားပေးလိုကြောင်းနှင့် drop-down menu တွင်အထူး tab တစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ food drive ဖြစ်ရပ်သည်ငွေကြေးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလှူဒါန်းမှုအတွက်အကြွေးတင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ JustGiving စာမျက်နှာကိုသွားခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာရန်လွယ်ကူသည် ဒီမှာ ။ စာမျက်နှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ၊ ပန်းတိုင်တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ၊ ထို့နောက်သတင်းဖြန့်ရန်သင်၏ online ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးစာမျက်နှာသို့ link ကိုဝေမျှပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူမှုမီဒီယာပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကို tag ရန်သေချာစေပါ။